ओली सरकारले राम्रो काम गरेको छ : सूर्यनाथ बास्तोला — Motivatenews.Com
सूर्यनाथ बास्तोला बरिष्ठ जलस्रोत विज्ञ हुनुहुन्छ । उहाँले ३ दशक धन्दा धेरै नेपालको जलस्रोत क्षेत्रमा काम गर्नुभएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको डाइरेक्टर इन चिफबाट रिटायर्ड हुनुभएका उहाँले जलस्रोत सम्बन्धी धेरै किताबहरु पनि लेख्नुभएको छ । हालसम्म पनि नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा सक्रिय भएर काम गरिरहनु भएका उहाँसँग गरिएको अन्तरवार्ताको मुख्य अंशहरु
तपाइँले लामो समय नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा काम गर्नुभयो तपाइँले गरेका केही उल्लेखनीय कार्यहरु के के हुन् ?
हो, मैले ३ दशकभन्दा धेरै नेपाल सरकारको सेवा गरेँ । त्यस शिलशिलामा धेरै महत्वपूर्ण पदमा रहेर नै काम गरे । मैले नोकरी शूरु गर्दा नेपालमा इन्जिनियरहरु एकदमै कम थिए । मैले धेरै समय जलस्रोतको विकास र विस्तारमा बिताएँ । पनौती प्रोजेक्ट मैले बनाएको हो । त्यसपछि देविघाट हाइड्रो पनि म नै चिफ इन्जिनियर भएर बनाएको हो । पछि मैले मस्र्याङदी प्रोजेक्ट सम्पन्न गराएँ । म विद्युत विभागको पूर्वाञ्चल प्रमुख भएर पनि लामो समयसम्म काम गरे । पूर्वाञ्चलमा विद्युतीकरण गर्नमा मेरो धेरै योगदान छ । छोटकरीमा भन्ने हो भने मैले नेपालको विद्युत विकासमा उदाहरणीय काम गरेर देखाए भन्दा सायद कुनै अत्युक्ति नहोला ।
नेपाल जलस्रोतमा अथाह स्रोत भएको देश भएर पनि यसको समुचित विकास हुन सकेको छैन, कारण के होला ?
नेपाल प्राकृतिक जलस्रोतमा प्रचुर सम्भावना बोकेको सुन्दर देश हो । यहाँ जलस्रोतबाट धेरै र ठुला ठूला हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाउन सकिन्छ । आजभन्दा १ सय वर्ष अगाडिदेखि नै नेपालमा जलविद्युतको विकास भएर पनि हालसम्म धेरै उत्पादन गर्न सकिएन । राणाकाल, पञ्चायतकाल र बहुदलीय ब्यवस्थामा पनि काम नै नभएका भने होइनन् तर उलेख्य मात्रामा काम हुन सकेन । सरकारहरु अस्थिर भए । काम गररै देखाउछु भन्ने आँट र भिजन भएका मन्त्रीहरु हुन सकेनन् थोरै भएपनि काम त भएकै हो नि ।
नेपालले जलस्रोतबाट धेरै भन्दा धेरै फाइला लिन के गर्नुपर्छ ?
सर्वप्रथम यसको प्रसस्त उत्पादन गर्नुपर्छ र भारत र बंगलादेशमा बिजुली निर्यात गरेर मनग्ये आम्दानी गर्नुपर्छ । यसको लागि बर्तमान सरकार र प्रधानमन्त्री स्वयं नै अग्रसर भइरहेको मैलै देखेको छु । ठूला आयोजनाहरु गर्न हामीसँग प्रर्याप्त पूँजीको अभाव भएकाले भारत तथा अन्य देशबाट लगानी ल्याउनुपर्छ । सरकारले उनीहरुलाई विश्वासमा लिन सक्नुपर्छ । नेपालको जलस्रोतमा लगानी गर्दा सुरक्षित हुन्छ र मुनाफा कमाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास दिलाएपछि मात्र विदेशीहरुल्े लगानी गर्छन् । नेपालको नीतिनियम लगानीमैत्री बनाउनुपर्छ । अर्को सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा संरचनामा परिवर्तन अत्याबश्यक छ । जलस्रोत विकास गर्न एक अर्को शक्ति सम्पन्न आयोग बनाउनुपर्छ । नेपाल बिद्युत प्राधिकरणले मात्रै यसो गर्न सक्दैन । यसले बितरणको काम गर्छ । भारत र बंगलादेशलाई विश्वासमा लिन जरुरी छ । उनीहरुसँग वार्ता र संवाद गरेर मात्रै अगाडि जानुपर्छ । सारमा भन्ने हो भने एक अधिकारप्राप्त र शक्तिसम्पन्न आयोग गठन गर्नुपर्छ । यसमा विषयविज्ञहरु रहने ब्यवस्था हुनुपर्छ । यही आयोगले नीतिनियमदेखि लगानीसम्म अइइपर्ने सबै काम गर्ने ब्यवस्था गरिनुपर्छ ।
ओली नेतृत्वको बर्तमान सरकारले त ऊर्जा विकासलाई प्राथमिकता दिएर नै अबको वर्षमा १५ हजार भन्दा धेरै बिजुली उत्पादन गर्ने महत्वकाँक्षी लक्ष्य लिएको छ के यो सम्भव छ ?
असम्भव त छैन तर यसको लागि भाषण भन्दा काममा ध्यान दिन जरुरी छ । यो सरकार स्थायी प्रकारको छ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा प्रधानमन्त्री केपी ओली दृढ इच्छाशक्ति भएको राजनेता हो । नेपालको जलस्रोतका विकास विना दिगो विकास सम्भव छैन भन्ने उहाँलाई राम्ररी थाहा छ । पछिल्लो समय धेरै कामहरु पनि भएका छन् । बंगलादेश र भारतसँग राम्रो कुराकानी भएको छ । भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले नै नेपालमा उत्पादित बिजुली हामी किन्न तयार छौं भनेका छन् । अहिले भारतले केही बिजुली हामीलाई दिएर लोडसेडिङ अन्त्य गराउन सहयोग पनि गरेको छ । ऊर्जामन्त्री पुन पनि निकै सक्रिय रुपले लागिरहनु भएको छ । ठुला ठुला आयोजना गर्न सरकारले कतिपय शाहसिक निर्णयहरु लिनुपर्ने हुन्छ । सरकार स्थिर र शक्तिहाली भएकोले अकिले यसो गर्न सम्भव पनि छ । प्रधानमन्त्री ओलीको भिजन स्पस्ट र विकासपे्रमी भएकाले आँउदा वर्षहरुमा नेपालमा उलेख्य मात्रमा जलस्रोतको विकास हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ ।
कोरोना रोकथाममा हामी एशियामै उत्कृष्ट : मन्त्री ढकाल